Tadiavo ao amin'ny Kolontsaina Sinoa sy ny Fiarahana Lovelorn
Tadiavo ao amin’ny Kolontsaina Sinoa sy ny Fiarahana Lovelorn
Sinoa mampiaraka dia toy ny mampisafotofoto, sy mahatalanjona, tahaka ny hafa karazana mampiaraka. Ho an’ny Tandrefana, ny fahavononana hianatra momba ny kolontsaina Sinoa dia afaka ny ho iray tsy mitovy fihodirana na ny iraisam-pirenena fifandraisana mafy orina kokoa. Ho an’ny vahoaka Shinoa izay te-hihaona hafa avy amin’ny iray ihany ny foko fototra, Internet mampiaraka toerana dia afaka manampy. Toy ny misy kolontsaina, tsy ny rehetra avy any Shina mizara toy izany koa ny finoana. Na izany aza, misy ireo fihetsika mikasika ny mampiaraka izany dia fahita teo anivon ny Sinoa. Manan-danja iray dia ny fandraisana anjara fianakaviana. Any Etazonia, izahay nampiasa ny hevitra izay manao ny safidy manokana momba izay isika daty sy izay tsy hanambady. Fa amin’ny nentin-drazana Shinoa ny fianakaviana, ny ray aman-dreny dia mety miandry mba hanana ny ambarany. Ny olana fa matetika no misongadina dia ahitana: Ianao maintsy mahazo an-olana raha toa ianao mihevitra fa ho an’ny rehetra Sinoa, mampiaraka izany. Ianao hihaona olona izay teraka any Etazonia, ary tsy mbola nonina tany Shina, fa izay mbola manaraka ny kolontsaina nenti-paharazana Shinoa. Ianao koa dia hahita ny olona izay nifindra eto amin’ny maha-olon-dehibe kanefa dia mahazo aina tanteraka amin’ny Amerikana fomba fiarahana.
Ny dikan’izany dia tsy misy tena misy zavatra toy izany ho toy ny ‘Shinoa mampiaraka. ‘Toy ny misy mampiaraka ny toe-javatra, dia ny momba ny mahafantatra ny olona tsy manam-paharoa, ny fomba fijeriny eo amin’ny fiainana, sy ny tombontsoa manokana, ny fanantenana sy ny nofinofiny. Raha liana ianao amin’ny fihaonana ny olona ny Shinoa fiaviana, manana safidy maro. Ny olona izay miaina amin’ny foko isan-karazany tanàna dia efa maro mety hihaona sy hiresaka amin’ny olona izay Shinoa na ny Sinoa-Amerikana. Raha toa ka miaina ao anatin’ny fiaraha-monina izay tsy dia maro ny Aziatika mponina amin’ny Aterineto afaka manampy. Miha-maro, fiarahana web manolotra toerana mety ho an’ny Shinoa mampiaraka. Misy karazany telo lehibe ny Shinoa mampiaraka toerana: Maro American ny lehilahy no tena tia ireo vehivavy Aziatika. Fa maro ny Shinoa-vehivavy Amerikana mitovy ny fitarainana momba ny olona izay liana amin’ny mampiaraka azy ireo. Izy ireo dia reraka ny ho raisina ho toy ny ‘Shina saribakoly,’ na ny stereotype fa izy ireo dia ‘mahafinaritra,’ ary ny zava-misy fa ny olona sasany dia toa liana kokoa amin’ny ny tarehiny noho ny ao an-tsainy.
Misy ihany koa ny mahazatra ny hevitra hoe vehivavy Shinoa mankatò na hanompo
Maro ny Shinoa-vehivavy Amerikana dia tafintohina noho izany hevitra izany. Izany tsy milaza fa ny olona iray dia mitady ny vahiny, fa ny mpankatò helpmate tsy afaka ny hahita ny fitiavana amin’ny vehivavy Sinoa, marina fa tsy mora ny hanao ratsy raha toa ka aoka ny fitsarana an-tendrony guide ny fiarahana miezaka
← AMBONY ny ANKAMAROAN'NY SHINOA MALAZA, ny FIARAHANA amin'ny FAMPIHARANA Fa ny Mandarin